တကယ်တော့ JAMES CORDEN ဟာအမြဲတမ်းဒစ်ခ်ျတစ်ယောက်ပဲ - သတင်း
တကယ်တော့ James Corden ဟာအမြဲတမ်းဒစ်ခ်ျတစ်ယောက်ပဲ
James Corden ကိုသင်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့ဖူးပါသလား။
ကျွန်တော်တို့သန်းပေါင်းများစွာအတွက်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပါ ၀ င်ခဲ့တာက Cardiff ရှိ dingy club မှာပိုင့်များကိုပြန်ခေါက်ခဲ့သည့်စမစ်၊ သူသည်သင်ကျောင်းသို့မဟုတ် uni မှသင်သိခဲ့သည့်ပိုကြီးသောဘဝဇာတ်ကောင်များ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မြို့အပြင်ထွက်ပြီးထွက်ခြင်းမှဖြစ်သည်။
သူသည် Gavin နှင့် Stacey တို့၏တကယ့်ကြယ်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ BBC3 မှဤနည်းနည်းမျှသာမှ James Corden သည်သူ၏အလုပ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကနေလူတိုင်းနှင့်အတူပုံကြမ်း အင်္ဂလန်ဘောလုံးအသင်း ရန် ဂျော့ခ်ျမိုက်ကယ် ထို့နောက်သူသည်ဗြိတိသျှဟာသ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည်တစ်နှစ်လျှင်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အနီရောင်နှာခေါင်းတွင် ၀ တ်စားဆင်ယင်ကာ ၀ န်ကြီးချုပ်နေရာမှထွက်ခွာခဲ့သည်။
သငျသညျနိမ့်ဆုံးဘုံပိုင်းခြေဟာသတစ်လျှောက်တွင်ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ပါတယ်ရှိရာတိုင်းပြည်၌သူ၏ကျော်ကြားမှုနှင့်ကံကြမ္မာကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောယခုရှက်စရာရှက်စရာဗြိတိန်တင်ပို့မှု, သူသည်မိမိအ moron အဘို့အခေါ်ခံရဖို့စတင်နေသည်။
သငျသညျလွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်းမှာအားလုံးအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြလျှင်မူကား, သင်ဂျိမ်းစ် Corden အကြောင်းကိုထူးဆန်းတစ်ခုခုသတိပြုမိကြလိမ့်မယ်။ သူကလူမိုက်ပဲ၊ သူကလိမ္မာပါးနပ်သူမဟုတ်တာ၊ ရယ်စရာမဟုတ်ဘူး၊ လူတော်တော်များများတောင်မှဗြိတိသျှအများစုကသိကြတာပဲ။
Horne နှင့် Corden တို့၏အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသင်ကြည့်ဖူးပါသလား။ ဘီဘီစီတွင်မည်သူမဆိုနှင့်သူတို့၏မိခင်များသည်ပုံကြမ်းပြသနိုင်သည့်ခေတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အပြင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထင်ရှားဆုံးအချက်မှာ၎င်းသည်ရယ်စရာမဟုတ်ပါ။
တစ် ဦး အကြောင်းကိုလိုက်တယ်ပုံကြမ်းကနေ လိင်တူချစ်သူသတင်းထောက် ယရှေုအကွောငျး (ဆယ်နည်းနည်းဟီရယ်ရီရယ်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်?) ဆယ်ကျော်သက်အဆင့်လူထွားများက Gavin နှင့် Stacey တို့၏ shit ကောင်လေးကအထိတ်တလန့်ပြောနေစရာမလို၊
သငျသညျသေးသေးသူ့ကိုအားဖြင့်ပိတ်ထားမခံခဲ့ရပါလျှင်, စိတ်မပူပါနဲ့။ သူသည်နောက်နှစ်အနည်းငယ်တွင်အထက်သို့ပျက်ကွက်သောစကားစုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
shit ၏ကြော်ငြာလက်တစ်ဆုပ်စာပေါ်ထွက်လာခြင်း၊ ကြီးမားသောဘတ်ဂျက်ရုပ်ရှင်များတွင်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကစားခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဆိုးရွားသည့်လိင်တူချစ်သူ Vampire Killers တွင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို 'ကောင်းမွန်သောဗြိတိသျှလက်အောက်ခံ' အဖြစ်သမ္မတကိုအမေရိကန်၌ပြသရန်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အမေရိကန်တီဗီ၏ဤမျှလောက်များကဲ့သို့သူသည်အတုပါပဲ။ သူနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသော၊ ရယ်စရာကောင်းသောအရာမရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ရန်မိုက်မဲလွန်းသည့်ပရိသတ်ကိုကစားသောအခါသူသည် Carpool Karaoke ကိုကြီးမားသောအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Apple Music မှ spinoff စီးရီး ။
သူလုပ်သမျှကောင်းတဲ့ကောင်၊ cheeky-chappy လုပ်တာကသူလုပ်တာပဲ။ တခါတရံတွင်မျက်နှာဖုံးစလစ်လာပြီးသူသည်သူမည်သည့်ကစားသမားဖြစ်သည်ကိုသင်အမှန်တကယ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
James Corden နှင့်ပတ်သက်သောဤ Popbitch ပုံပြင်သည်ဟုတ်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိသော်လည်း၎င်းသည် * ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကသူနှင့်ပတ်သက်သမျှအားလုံးကိုသင့်အားပြောပြသည်။ pic.twitter.com/Kne7ySjskm
- Seb Patrick (@sebpatrick) အောက်တိုဘာလ 15, 2017
ဒီကလစ်ထဲမှာ, ပုရွက်ဆိတ်နှင့်ဒီဇင်ဘာရဲ့စနေနေ့ည Takeaway အဘို့အပြောင်မြောက်သောအရာ, ဂျိမ်းစ် Geordie နှစ် ဦး အားဖြင့်နှင့်အတူရှုပ်ထွေးနေသည်, ငါသိတယ်သိတော်မူသောကစားခြင်းမှသိသိသာသာအမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များနီးကပ်လာပြီ? ကဒ်။ မျက်နှာဖုံးကနည်းနည်းချော်တယ်။
ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားကတော့ Harvey Weinstein ကိုရယ်စရာမဖြစ်စေတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပေါ့ပေါ့ဆဆဟာသလုပ်တာကသူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပြောပြတာပါ။
သူကနက်ရှိုင်းချတွေ့ရှိသူတစ်စုံတစ် ဦး ပါပဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးပြက်လုံး တော်တော်လေးရယ်စရာကောင်းတယ်၊ သူတို့ကအေအိုင်ဒီအက်စ်ရန်ပုံငွေရှာတဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ပေမယ့်သူရဲ့ပြပွဲမှာတော့မဟုတ်ဘူး။
သူကကမ်းလှမ်းသူတစ် ဦး ပါပဲ အားနည်း platitudes သူ Emmys မှာ Sean Spicer ကိုနမ်းခြင်းကဲ့သို့မိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုလုပ်သည့်အခါ။
သူကတစ် ဦး ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်သူ၏မကောင်းတဲ့ပြက်လုံးပယ်သွားဖို့ကြိုးစားသောကောင်လေးမျိုးပါပဲ စော်ကားသောသူကိုအရှက်ကွဲစေလော့ ။
၎င်းသည်လူအများစုအတွက်အထူးသဖြင့်အမေရိကတိုက်တွင်ဖြစ်သည်။ သူသည် Carpool Karaoke ကိုလုပ်သောဆူညံသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းသင်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါကသို့မဟုတ် ဦး နှောက်သို့မဟုတ်မျက်စိရှိလျှင်၎င်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။
သူ၌မျက်နှာနှစ်မျိုးရှိပြီးသေနတ်ကိုင်ခြင်းနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်လေးနက်သောအချက်များပြုလုပ်သောချစ်စရာကောင်းသောအများပြည်သူလူရွှင်တော်နှင့် uni သို့မသွားသောသင်၏ moron အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လိုက်ဖက်မည့်ဂျက်ကလာသည်သူမမျက်နှာနှစ်ခုရှိသည်။
ဂျိမ်းစ် Corden / စမစ် / ယေဘုယျ Essex wide-boy သည်ထိုတွင်ထားခဲ့ပါ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။